“Saddexdan kooxood ayay Juventus kula dagaalami doontaa tartanka Champions League” – Pjanic – Gool FM
“Saddexdan kooxood ayay Juventus kula dagaalami doontaa tartanka Champions League” – Pjanic
Dajiye December 4, 2018
(Juventus) 04 Dis 2018. Laacibka khadka dhexe kooxda Juventus Miralem Pjanić ayaa ka hadlay saddexda kooxood ee xili ciyaareedkan ku guuleysan karta tartanka Champions League.
Miralem Pjanić ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada caanka ah ee “Calcio Mercato” waxyaabihii uu kaga hadlay waxaa ka mid ahaa kooxaha uu filayo aragti ahaan inay ku guuleysan karaan Champions League xili ciyaareedkan.
“Waxay ila tahay in ay muhiim tahay inaan isha ku heyno kooxaha Barcelona, ​​Real Madrid iyo Manchester City”.
Intaas kadib Miralem Pjanić ayaa wuxuu ka hadlay kulanka adag ay kula ciyaari doonaan kooxda Inter Milan horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
“Waan ka war qabnaa in Inter Milan ay tahay koox weyn ee aad u fiican, waxaan dooneynaa inaan badino, sidaas darteed waxaan sare u qaadi karnaa farqiga inoo dhexeeyo anaga iyo kooxaha uu loolanka naga dhexeeyo”.
Si kastaba kooxda Juventus ayaa hogaanka ku heysa 40 dhibcood, waxayna sideed dhibcood nadiif ah u jirtaa Napoli oo leh 32, halka 11 dhibcood ay ka ka sareyso Inter Milan.
“Waxaan u baahanahay mucjiso si aan ugu soo baxno tartanka Champions League” - Mourinho
Diego Simeone oo ka hadlay ciyaaryahanka u qalmay inuu ku guuleysto abaal marinta Ballon d'or 2018